Mofon'aina Alarobia 11 Febroary 2015 | FJKM Amboniloha
ASAN’NY APOSTOLY 6.1-7
Porofon’ny fiitaran’ny fiangonana sy rindrandamina
Rehefa mandroso ny fitoriana ny Filazantsara dia mitombo ny fiangonana ka nilaina ny fananana rindran-damina sy olona mifanaraka amin’izany fitomboana izany . Manjary porofon’ny fiitaran’ny fiangonana ny rindran-damina . Tsy maintsy nozaraina ho roa ny andraikitra tao amin’ny fiangonana (and2) izay ho mpanompon’ny Teny andaniny , ary hiandraikitra ny asa sosialy ankilany ka ho mpanompon’ny asa .
Ny mpanompon’ny Teny
Andraikitra nosahanin’ny Apostoly izany, ary sahanin’ny Mpitandrina ankehitriny. Izy ireo dia hanana ireto toetra fototra ireto : Tsy mandao ny Tenin’ Andriamanitra, izany hoe : sady velomin’ny Tenin’ Andriamanitra no mamelona ny Tenin’ Andriamanitra eo amin’ny olona amin’ny maha- mpampianatra ny Tenin’ Andriamanitra azy. Manana faharetana amin’ny fivavahana, feno fifandraisana amin’ Andriamanitra .
Ny mpanompon’ny asa
Mpitandrina latabatra no iantsoan’ny Apostoly azy eto. Maneho ny asan’ny Diakona amin’izao fotoana izao izany. Olon’ny fahaiza-miasa hisorohana ny disadisa eo amin’ny fiainana ara-tsosialin’ny fiangonana, olona tsara laza eo amin’ny fiaraha- monina, feno ny Fanahin’ Andriamanitra ihany koa ireo .
Inona ny andraikitry ny fiangonana amin’ny ankapobeny ?
Catégories :	Mofon'aina	/ par AnjGab 11 février 2015